Laba warbixinood oo kusaabsan Dagaalka Buulo-Xaawo iyo Baaq Nabadeed oo ku wajahan dagaalkaan
Dagaal ay ku dhinteen 20-qof oo saakay ka dhacay magaaladda Buulo-Xaawo
Waxaa saakey magaalada Buulo Xaawo ka bilowdey dagaal aad u qaraar oo u dhaxeeyey maleeshiyooyin ka tirsan ururka SNF/SRRC waxaa dagaalkaas la isku adeegsadey hubka noocyadiis kala duwan waxaana la sheegey in dagaalka ay soo qaadeen kooxdii hore looga saarey magaalada wuxuuna dagaalkan uu ku soo beegmey xilli ay waan waan u socoto labada dhinac, waxana la filayey in dhawaan la isa soo hor fariisiyo kooxha is haya lamana garanayo waxa dagaalka uu ka bilowdey balse warar baa waxay sheegayaan in kooxda weerarka soo qaadey aysan ku qanacsaneyn waan-waanta laga dhexwadey
Dagaalkan ayaa xaqiijiyay in ay ku dhinteen ilaa 20 qofood waxaana ku dhaawacmey ilaa 40 qof oo la sheegey in ay u badnaayeen kooxihii dagaalamayey waxaa kaloo la sheegay in maydka uu daadsan yahay magaalada dhxdeeda waxaaa sidoo lagu waramey in dadkii dhaawaca ahaa ay ku dandareysan yihiin xaafadaha dhexdooda,.mana jirto wax Isbitaal ah oo ku yaala Magaalada,waxaana Isbitaal ugu dhaw magaaladda Mandheera ee Wadanka Kenya, iyadoo ayna jirin wax kala dhex galay dhinacyada dagaalamayay, Laakiin warar ayaa sheegaya in kooxdii werarka soo qaaday laga saaray Magaalada, dibna loogu celiyay halkii ay ka soo duuleen oo magaalada Buuli Xaawo u jirta 35-km, waxaa kaloo la sheegay in kooxdii weerarka soo qaaday gacanta looga dhigay 3-gaari oo laba ka mid ay ahaayeen Tikniko, halka kan kale uu ahaa gaari Caasi ah, balse dhinaca kale wax war ah lagma hayo waxyeelada ay geeystee, hase ahaatee mar aan la xiriirnay Magaalada BaarDheere waxa ay noo sheegeen in haatan ay magaaladu dagan tahay, gacantana ay ku hayaan kooxdii hore ugu sugneyd.
Dowlada Ethiopia ayaa damacday in heshiisiin u sameyso Maleeshiyooyinka dagaalamaya, iyadoo doneysay in isugu keento magaalada Dooloow, balse taasi ma suurtagalin oo labada dhinac midkood kuma qanacsaneyn waan-waanta Ethiopia, iyadoo la sheegay in Ethiopia ay dhinac u xaglineyso
Dagaalkan waxa uu ku soo beegmay xilli loo fadhiyo wajiga saddexaad ee Shirka Dib u heshiisiinta Soomaaliya ee ka socda Wadan Kenya, waxaana hore looga wel-wel sanaa dagaalo ka socday muddo 20-maalmood ah Woqooyiga Muqdisho, sidoo kale waxaa iyan dagaalo ay ka bilowdeen tuulada lagu magacaabo Tugaar-Hoosle oo 35-km u jirta degmada Diin-Soor ee Gobolka Bay.
Warbixin labad ee dagaalka Buulo Xaawo:
Dagaal ba�an ayaa maanta mar kale ka qarxay Magaalada B/xaawo ee Gobolka Gedo.
Warar kale ayaa sheegaya in ay dagaalka Buulo xaawo ku dhinteen 31 qof..Guji
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo Magaalada Balad Xaawo waxaa halkaasi markale ka dhacay Dagaal sababay dhimasho,dhaawac iyo Barakac aad u baadaxad wayn oo soo Wajahay dadkii daganaa Magaaladaasi.
Qaark amid ah Dadka ku dhaqan Magaalada Balad Xaawo oo aan kula xiriirnay qadka isgaarsiinta Fooneeyaha loo yaqaan ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in uu Dagaal daran ku dhexmaray Gudaha iyo Dibada Magaalada B/Xaawo Maleeshiyo Beeleedyo baryahanba isku haystay Gacan ku haysta Magaalada B/Xaawo.
Dagaalkan oo bilowday sida ay sheegayaan wararka laga helayo ilo Xog ogaal ah Gelinkii hore ee manta ayaa waxaa uu socday Waqti aan sidaa u sii badnayn Kadib markii Magaalada gabi ahaanba laga saaray Maleeshiyadii Weerarka ku soo qaaday Magaaladaasi B/xaawo,kuwaasoo kasoo Horjeeda Maleeshiyada iminka Gacanta ku haysta Magaalada B/Xaawo.
Qasaaraha Dhimasho iyo dhaawac ee uu gaystay Dagaalkan ayaa waxaa lagu sheegayaa in dhimashada ay dhan tahay 20 qof halka dhaawacana uu kor udhaafayo ilaa iyo 39 qof ,kuwaasoo u badan Dadka Rayid ah ee aan waxba kala socon Dagaalada hareeyay Magaaladooda.
Dagaalkan ayaa yimidkadib markii ay hishiis Xabad joojin ah wada gaareen dhawaan Garabyadii ku dagaalamayay Magaalada B/xaawo,hishiisyadaas oo ka kala dhacay Magaalooyinka Mandheera oo ah Magaalo ku taala Xadka Kenya iyo Somalia,Doloow Ethiopia iyo Degmada Ceel Waaq oo ka tirsan Gobolka Gedo.
<><><> BAAQ NABADEED<><><>
G/W/S/017/04 London, 01/06/2004
Ujeedo:- Dagaalada ka socda Magaalooyinka.Balad xaawo iyo.........
Waxaan aad uga xunnahay dagaalada iyo iska horimaadyada hubeysan ee maalin walba laga soo sheegayo dalka Soomaaliya, dagaaladan oo u dhaxeeya qeybaha ku hardayamaya magaalooyin ka tirsan koofurta Soomaaliya.
Dagaaladan dhacaya xilligan oo ay in badan dadka Soomaaliyeed rajo badan ka muujinayaan howlaha dib-u-heshiisiinta ee hadda socda, ayaanan garaneyn waxa sababay in ay dagaallo dhacaan.
Nasiibdarro waxyeelada dagaalada oo isa soo tareysa darteed ayaan ugu baaqeynaa qeybaha ku dagaalamaya magaalooyinka Balad-xaawo iyo Diinsoor oo ka kala tirsan gobollada Gedo iyo Bay ee dalka Soomaaliya in ay gartaan danta iyo maslaxadda dadkooda.
Waxaan shaki ku jirin in qeybaha dagaalamaya aysan war badan u heyn qasaaraha laga dhaxlayo dagaalka ee isugu jira, Dhimashada, Dhaawaca, Barakaca iyo korarka maciishada aysan sahlaneyn in xilligan ay noolaadaan danyarta ay korkooda isku dilayaan.
Hadaba Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa qeybaha uu dagaalku ku dhexmarayo magaalooyinkaas:-
1- In shuruud la'aan xabadda loo joojiyo.
2- In wixii qilaaf ah ee jira wada hadal lagu dhameeyo.
3- In la xusuusto xiriirka wada dhalasho iyo kan Soomaalinimo ee
4- In ay u damqadaan danyarta iyo shacabka aan waxba galabsan
ee u dhimanaya dagaalada iyaga dartood.
5- In la garowsado in dagaalada ahliga ah cid ku guuleysaneysaa
Ugu dambeyntii waxaan taageereynaa waanwaanta iyo xabad joojinta laga hirgaliyay W/magaalada muqdisho, gaar ahaan dhinacyadii dhowr iyo labaatanka cisho ee ugu dambeeyay dagaalada isaga soo horjeeday.
Xubin Golaha dhexe Somali Concern Group
Wararkii kale ee maanta waxaa kamid ah:
Ka akhri halkan...